Indlu yelog egqwesileyo enesauna eLahemaa!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguInga
UInga ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu yam yabucala eyenziwe ngezandla ingamakhulu ambalwa eemitha ukusuka elunxwemeni lweHara bay, ngaphakathi entliziyweni yeLahemaa National Park, engqongwe zizilwanyana zasendle kunye neentyatyambo. Yingcwele emangalisayo kuye nabani na ukuba aphumle kwaye ayonwabele, iparadesi egqibeleleyo yokonwaba, ukuzola, okanye ukubaleka kwezothando ekungekho mntu unokuzisola. Yiva impepho epholileyo, yiva ivumba lemithi yepayina, mamela ukuntyiloza kweentaka, okanye ukuba ujonge iholide edlamkileyo, unokufumana izinto ezininzi ezibalaseleyo, ezikumganyana nje ongephi.
Indawo ezolileyo, ezolileyo, amagqabi amaninzi kunye nemithi, kunye nezulu labucala lakho kunye nabo ubathandayo.
Yamkela iqela losapho, izihlobo, okanye isibini esoneliseka kukuchitha ixesha elisemgangathweni kunye ngelixa siziva ubuhle bendalo yethu kamama.
Kumgangatho wokuqala wale ndlu yelog, kukho indawo yomlilo enkulu yokukufudumeza ebusuku, igumbi lokuhlala elipholileyo elineTV enkulu, ikona yekhitshi exhotywe ngokupheleleyo ukulungiselela ukutya okunesofa, ibhedi etofayo yesofa yomntu wonke, isauna yokuphumla, icocekile. yangasese, kunye negumbi lokuhlambela.
Indawo yokulala ikumgangatho wesibini. Indawo yokungena imi ngaphandle nje kwendlu. Inebhedi enkulu yabantu ababini kunye nabancinci ababini njengendawo yokulala eyongezelelweyo.
Ukuba ufuna indawo eninzi, nceda undazise. Kukho izindlu ezimbini ezingakumbi zeendwendwe ezikulo mmandla kwaye ndiqinisekile ukuba singasifumana isisombululo. Le yinto enokuthi ayinikezeli wonke umntu apha eLahemaa. Ukuba nendawo efanelekileyo yeyona nto ungayifumana.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Ukuqhuba nje okufutshane kwaye unokufumana indawo yokutyela yeLahemaa Café, indawo epholileyo yokuba ukonwabele ukutya okunencasa kunye neziselo. Zezona ndawo zithandwayo ngabakhweli, iibhayisekile, kunye nabathandi bendalo.
Ngelixa useLahemaa, fumana ithuba lokutyelela indawo eyimbali kulo mmandla, iPalmse Manor. Inika uluhlu olubanzi lwemisebenzi, imiboniso, kunye neenkqubo unyaka wonke. Ungalibali ukungcamla ukutya kwayo kwasekhaya kunye newayini evela kwiwayini yabo.
Umgama oziikhilomitha ezili-15 kuphela, uya kuba nethuba lokuhambahamba kuloliwe omangalisayo weLahemaa National Park. Indlela eyothusayo yokuba ubone imimangaliso yendalo ukusuka entlakohlaza, ehlotyeni, ekwindla nasebusika. Ngqina iimbono ezimangalisayo kwindawo, isibhakabhaka esinomdla, amachibi e-bog. Uya kufumana ukuphumla ngokupheleleyo kokuba ngaphandle wedwa okanye kunye nabahlobo bakho kunye nosapho.
Ngaphandle kwamava amnandi okuhamba kwindlela ethandekayo kunye neempawu zomhlaba eziphawulekayo, iLake Lohja yindawo enomtsalane ongafanele uyiphose. Unokukonwabela ukuqubha kunye nokuloba. Singasathethi ke, ichibi likumgama nje omfutshane wokuhamba ukusuka kwihlathi lakudala lepayina kunye nespruce.
White River kunye nesixeko saseLoksa
Indawo okuyo ikwakufutshane kakhulu kwisiXeko saseLoksa. Ngaphandle kokonwabela amanzi acwengileyo oMlambo oMhlophe, ukuba ufuna igrosari, amayeza, imali, okanye igesi, kukho iivenkile ezithengisa ukutya, ikhemesti, ii-ATM kunye nezikhululo zerhasi onokuzifumana phakathi kwesixeko.
Omnye umtsalane obalaseleyo onokuthi uwukrobe siSiqithi saseMonhi. Fumana ithuba lokubona i-lighthouse, ihlathi le-oki, kunye nezinye izakhiwo. Ungandwendwela isiqithi ngesikhephe okanye ngesikhephe.
I-Käsmu kunye nelali yaseVõsu
Malunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka apho kukho ilali entle yaseKäsmu, elikhaya lokusingatha imisitho kunye nemyuziyam yaselwandle. Ingummelwane welali yaseVõsu, ekwayindawo enomtsalane ukuba ukonwabele iikonsathi zasekhaya nezamazwe angaphandle kunye nemisebenzi kunye nokutyelela iklabhu yasebusuku yasekhaya.
Altja ilali yokuloba,
Indawo apho unokubona khona ii-loghouses zembali kwaye ube nombono wendlela ababehlala ngayo abantu apha e-Estonia kwiinkulungwane ezadlulayo. Ngexesha lasehlotyeni, kukho nevenkile yokutyela evuliweyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Inga
Mna okanye abahlobo bam baya kufumaneka ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho.